Shahrukh Khan (New Delhi, 2 nofeembar 1965)
sharukh waa jilaa hindi oo 50 jir sharukh khan waxa uu guursaday gouri khan oo iyaduna ah filim sameeye sharukh khan film fare award for best actor 8 jeer waxana uu ka mid yahay dadka u caansan dalka hindiya siiba aktariinta jisha filimada hindiga ah Shahrukh Khan ( ku dhashay 2 November 1965 ) , inta badan la yaabliyo, Shah Rukh Khan iyo faahfaahiyay sida Shah Rukh Khan , waa filim jilaaga Indian , soo saaraha , TV martida , mentor iyo philanthropist . Gudbiyay ee warbaahinta sida " Badshah ee Bollywood " ama " King Khan " , ayaa wuxuu u muuqday in ka badan 50 doorarka hogaanka u soo diraa laga bilaabo ayey si tallaabo iyo majaajilooyin . [ 4 ] [ 5 ] uu shaqo ee suuqa filimada Hindiya ayaa waxay kasbatay isaga guulaha badan , oo ay ku jiraan afar iyo toban Filmfare Awards intii soddon magacaabidda . Waxa uu side
https://en.wikipedia.org/wiki/Shahrukh_Khan#cite_note-Inner-1">[1</a> degaanka mombai india
shaqada jilaa soo saare
sanada shaqada 1988 (ilaa hada)
xaaska gauri khan
caruurta 3 saxeexa
edaad badiyeen Award Actor Filmfare Best isaga ku Bollywood jilaaga ugu abaal waqtiga oo dhan ee category in , xidhxidhnaa oo kaliya jilaaga Dilip Kumar dhigay . Wuxuu ahaa abaal leh Premraj ka qodneyn waxa uu by the Government of India ee 2005 , iyo des ordre ee Arts et des Lettres by the Government of France sanadkii 2007 , isaga oo ka qayb qaateen in ay filimada . [ Tigidka loo baahan yahay ]
Laga bilaabo mustaqbalkiisa u muuqday masraxa iyo dhowr barnaamij taxane telefishan ' ee 1980 , mar dambe ayuu sameeyey isaga oo u saftay Hindi film 1992 with Deewana . Hore ee mustaqbalkiisa ciyaareed , Khan waxaa loo aqoonsaday inuu doorasho aanan caadi ah oo la kulaney ee doorarka negative ee filimada sida Darr (1993) , Baazigar (1993) , iyo Anjaam (1994) for . Mar dambe ayuu u kacay inuu ka caan by ciyaaro taxane ah oo kaalimo in majaajilooyin jacaylka ama ruwaayado sida Dilwale Dulhaniya Le Jayenge (1995) , [ 6 ] Dil To Bollywoodka ( 1997 ) , Qaylodhaan Qaylodhaan Hota Hai ( 1998) iyo Kabhi Khushi Kabhie Gham ( 2001 ) . [ 7 ] guusha ganacsi ee filimada , kuwaas oo isaga kasbaday tag ah ee " Boqorka Romance " . [ 6 ] Khan ka dibna markii dambe wax la kasbaday mahadnaq muhiim u ballaaran , isaga oo wixii qadaf ah ee cilmiga NASA ah ee Swades ( 2004 ) , tababare xeegada in a Chak De ! Hindiya (2007) , iyo sida ay characters Malasfax ee Devdas ( 2002 ) iyo My Name Ma Khan ( 2010 ) . [ 8 ] [ 9 ] Thirteen oo ka mid ah filimada uu in u dhaqmeen , wxbarashada dakhliga buuran ee ka badan INR100 crore (US $ 16 million ) oo dunida ah , [ 10 ] [ 11 ] isaga mid ka mid ah jilayaasha ugu guulaha badan ee keenta Hindi shineemo samaynta . [ 12 ]
Khan hawlo jagada of Co-Chairman of -soo-saarka iyo qaybinta shirkadda sawirka dhaqdhaqaaq , Red karri Entertainment iyo studio dhaqdhaqaaq ah , Red karri VFX . Waxa uu sidoo kale waa wada- owner of kooxda Indian cricket Premier League Riders Kolkata Knight . [ 13 ] sanadka 2007 calaamadsan oo uu u saftay sida hor imaadka ayaa telefishanka la ciyaaraha Star Plus show Kaun Banega Crorepati . A [ 14 ] Khan waxaa inta badan la calaamadiyey by warbaahinta sida " Shah Rukh Khan Brand " sabab u biimeynta ayidaad nooc iyo ganacsi-abuurka uu kala duwan . Waxa uu sidoo kale ku lug lahaa iskudayayaa qabeen ah oo la xidhiidha daryeelka caafimaadka , lacagaha gargaarka iyo waxbarashada carruurta , kaas oo uu ku sharfeen isku diiddan Pyramide abaalmarinta Marni ayaa UNESCO ee 2011 . [ 15 ] [ 16 ] Khan waxaa loo arkaa in ay mid ka mid ah filimada ugu weyn stars ee taariikhda filimada , masaf soo socda ayaa sheegtay in ay soo tiriyaan in balaayiin ah; ee 2011 , ka Times Los Angeles isaga loo yaqaan " star dunida movie ugu weyn . " [ 17 ] wuxuu sidoo kale la joogto ah featured ee dagalka ka mid ah magacyada ugu dhaqanka Indian iyo sanadkii 2008 , Newsweek isaga magacaabay mid ka mid ah 50 qof ee ugu awoodda badan dunida oo dhan.
1 1.noloshii hore
Khan waxa uu ku dhashay on 2 November 1965 ee New Delhi , India ,  [ 2 ] [ a ] oo soo koriyey ee Mangalore ee shanta sano ee ugu horreeya ee uu noloshiisa . [ 20 ] [ 21 ] oo uu awoowe uu ahaa injineer Chief ee Mangalore dekadda 60eeyaha . [ 22 ] Markaasaa aabbihiis , Taj Mohammed Khan , korsiay qowmiyad , waxay ahayd dhaqdhaqaaqe madaxbanaanida Indian from Peshawar , British Hindiya ( maanta Pakistan ) . [ 23 ] Sida ay Khan , board- dhiganayo asal ahaan wuxuu ka yimid Afgaanistaan ​​. [ 24 ] oo hooyadiis , Lateef Fatima , waxay ahayd gabadhii qaatay ee Shah Nawaz Khan , General Major ah ee Ciidanka Qaranka Hindiya . [ 25 ] Shahrukh Khan aabihii in si New Delhi ka yimid Qissa Khawani Bazaar ee Peshawar ka hor 1947 Risaalo ka mid ah Hindiya .  marka laga inuu asal ahaan , Khan wuxuu isu sharaxay on Twitter sida " hyderabadi kala badh ( hooyada ) , nus korsiay (aabbihiis) , Kashmiri qaar ka mid ah ( ayeeyo ) "  Aabbihii waa uu dhintey kansarka markii Khan ahayd 15 sano jir , iyo hooyadiis ku dhintay 1990 ka dib markii xanuun daba dheeraaday . [ 28 ] [ 29 ] Khan oo ahaa mid aad u lifaaqan Waalid inuu u aqbalin sida ilmo iyo qeexayaa dhimashada ay hore sida tub in uu nolol iyo sida uu dhiiranaanta ugu weyn ee shaqo adag . Khan wuxuu leeyahay walaashaa ee oday la odhan jiray Shehnaz . [ 30 ]
2.shaqada uu ka shaqeeyo
https://en.wikipedia.org/wiki/Gauri_Khan" title="Gauri Khan">Gauri </a> Khan2012; waxay guursatay xitaa ka hor ayuu xirfadda filimka bilaabay in 1992
3.Guul u Ba'an iyo ganacsiga : 1993-97
4.1998-2002: aqoonsi International
5.2003 : dhaawac kheyr iyo qalliin ku xiga
6. 2003-10: jilista iyo ogey
7.2011 - jooga : ee kale Continuing